Muva nje, entanyeni yazo abantu abaningi, ungabona umhlobiso kakhulu ngesimo inkanyezi nambili enamaphoyinti nge esiphambanweni Maltese phakathi. Lokhu akuyona into yesikhashana, njengoba kungase kubonakale efika kuqala, a lwasendulo njengentelezi inkanyezi Ertsgammy ehola nomnikazi wakho ngokuvumelana ukuzithuthukisa emhlabeni, ngokusiza embule ezingaba ezingokomoya ukuthuthukisa inhlalakahle, enikeza uthando nomndeni injabulo.
Ngaphandle sobuhle bayo, kukhona kufanekisa
Ertsgammy inkanyezi uqukethe izinhlobo ezine onxantathu equilateral. Njengoba yaziwa, unxantathu limelela Ukuvumelana umphefumulo, ingqondo nomzimba, okungukuthi, eqinisweni, yilokho isithombe ufanekisela indoda. Kwelinye nekuhumusha ke - isithombe sendoda edwengulwe izinkanuko nezilingo, kodwa, naphezu kwalokhu, abalwela ukungawenzi amaphutha ezingokomoya.
Sekungamakhulu amaningi eminyaka, inkanyezi Ertsgammy sikhombisa indoda ukuthi, okunjengokwakhe emhlabeni kwangaphakathi, kuyingxenye ebalulekile yonke.
Ngaphezu kwalokho, umgexo wenhlanhla ongenza omuhle vibration harmonic, ngoba lisebenzisa isimiso odumile esigabeni segolide.
Star Ertsgamma. Lokho Okushiwo ubuKristu
Iminonjana Ertsgammy usukela ezinkolweni emhlabeni ezintathu - ubuKristu, ubuJuda Hinduism. Ngakho, ke iphathwa ohlelweni ngamunye ngendlela yalo.
AmaKristu belandisa amaphuzu 12 inkanyezi ne abaphostoli abangu-12, futhi isiphambano - kokufa nokuvuswa kukaJesu Kristu. Ertsgamma futhi ezihambisana ne Virgin Mary ngisho ukuboniswa phezu Nesisa isithonjana. Yiqiniso, lokhu ubuhlobo ubuKristu nge eziningana draw Ertsgammoy njengesifanekiselo emdala. Kuyinto, kunalokho, abathile benkolo ukusebenzisa umqondo womunye, wokuboleka bese lithathelwe izinhlamvu ezikhona ngaphansi uhlelo oluthile.
UbuJuda ubona njengentelezi Star double kaDavide, okuyinto ebonisa Ukuvumelana iduna nensikazi, enguNkulunkulu futhi engumuntu, izulu nomhlaba eyaziwa, futhi ngaphezu kwalokho, uyakwazi ukuvikela abantu amabutho umthelela. Ubudlelwano kanye Hinduism sengathi Ertsgamma ukhumbuza ukubonakala kwakhe omunye Chakra - inhliziyo Chakra, Anahata, nalo amacembe nambili.
Ngaphezu izinkolo zezwe, uphawu Kulula ukuthola phakathi amaCelt, le amaCopt, le Semites ngisho e Russian North, eveza jikelele walo. Kuba sobala ukuthi inkanyezi Ertsgamma, ukubaluleka okuyinto elahlekile Emiphakathini eminingi, kuba lasendulo okuningi kuka kukholelwa kanjalo ngokuvamile.
Yini umphumela kuletha okokugqoka iziphandla
Inkanyezi Ertsgammy, njengoba sibona kwasekuqaleni ngesikhwama esivikelayo njengentelezi namandla amathuluzi. Ertsgamma esusa biofield we accretions energy negative, aqede amabhlogo, izibopho, oyenza isebenze nezikhungo energy - Chakras, ikakhulukazi Anahata. Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona Ertsgammy okuhloswe ngaso nasekuqiniseni izikhungo ezehlukene. Ake ngithi nje, usizo abahlosiwe.
Lapho umuntu uya esitolo bese unquma ukuthi ngaye njengentelezi engcono ngeke inkanyezi Ertsgammy, isithombe, ayengakaze yena akakaze abone, kungase kungahambisani nalokho wanikelwa. Into wukuthi kukhona izinhlobonhlobo eziningana umgexo wenhlanhla.
Inketho One - Emerald Star, esiphambanweni isiliva, kanye nesigaxa oluhlaza inhliziyo ngemuva. Lolu khetho sithuthukisa Ertsgammy Anahata, uphulukisa izinhlaka esifubeni usiza ukwakha ubudlelwano. Ngokuvamile, Anahata ukulalelisisa kakhulu imikhuba eziningi ezingokomoya. Lokhu kungenxa yokuthi ukusebenza lokhu Chakra kusiza umuntu agqashule ekusebenzelaneni focus on the imithombo ukuhlangabezana ezingeni leliphasi - amandla, imali, ucansi, engaphansi kwe-Chakras aphansi. Ngakho, umuntu uya isigaba ephakeme yentuthuko, okwembula amandla akhe omoya.
Kuyinto kule Chakra uMoya uwina ukuzazisa, kwashona umona, ukucasuka, umona okuletha Imiphumela yayo omuhle kuzo zonke izici zokuphila.
Indlela yesibili ngoba abantu abaningi abanokuhlangenwe nakho ezindabeni harmonization Bioenergy. Yena ithuthukisa umbono kwangaphakathi, sivumelana imisebenzi ubuchopho futhi likuvumela kusebenze inqubo ukuhumusha. Kuqondiswe ngesikhathi yesihlanu (Visuddha), lesithupha (Adjna) neyesikhombisa (Sahisrara) Chakra - blue spectrum kunyakaza. Star ultramarine blue ne isikhungo violet esiyingini engu- esiliva-blue. Sikugcizelele, ngoba kumnandi noma okokuqala inkanyezi esinjalo abanakukuthola! Lokhu kungaphumela ezinkingeni ezingathi sína - kokubili ngokomoya nangokwenyama.
Inketho lwesithathu. Violet inkanyezi. Uhluka hhayi kuphela umbala kodwa futhi maphakathi - kukhona cut amethiste ekhethekile. Okunjalo inkanyezi muhle self, nemikhuba ephulukisa.
Igxila izakhiwo itshe, okuletha umnikazi ukucaciseleka engqondo futhi kusiza ukuba simelane okubi nezilingo ezihlukahlukene. Nokho ukubeka amethiste inkanyezi ngaphansi komqamelo - ngeke zikhishwe amaphupho amabi futhi ngcono imikhuba ehambisana amaphupho. Kufanele kukhunjulwe ukuthi lesi inkanyezi kudlule kwabanye abantu kuyinto engathandeki kakhulu, ngoba itshe amethiste siqu kakhulu kuboshelwe umnikazi.
Futhi inketho yokugcina - inkanyezi nge Runes, ibekwe ngaphakathi, futhi phakathi nendawo iyona Rune, ukuvikelwa umnikazi yenethiwekhi futhi ngesikhathi esifanayo isebenze amathalenta namakhono akhe. Lena talisman enamandla kakhulu umnikazi, futhi mathupha, futhi yonke indlu. Kuyasiza ukubuyisela umsebenzi emzimbeni futhi ukunika amandla ukuqaliswa amapulani. Buza azungeze abangane bakho ogqoka imigexo inkanyezi Ertsgammy. Izibuyekezo zabantu kuyoba kuwe-agumenti main kuyi ukuthenga ubucwebe. Khumbula ukuthi uthenga hhayi nje trinket, kodwa lokho bekuyoba njengentelezi iminyaka eminingi.
Ukuze ufake inkanyezi Ertsgammy saletha izinzuzo zangempela, kubalulekile ukwazi ukuthi usebenza njani uzigqoka.
Indlela ukugqoka Ertsgammy inkanyezi
njengentelezi ezigugile ngokuvamile ku ngokwayo, ngokuvamile entanyeni. It is ikakhulukazi Kunconywa for iziguli. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuba unamathisele indawo evelele kunazo zonke endlini, ukuhlinzeka njalo contact ezibukwayo ne uphawu.
Kungcono ukugqoka njengentelezi ku neketanga isikhathi eside ngokwanele ukuze kufinyelelwe cishe maphakathi nesifuba. Ngakho umphumela uzobe laba likhulu. Njengoba wathenga liyinkanyezi njengentelezi Ertsgammy indlela efanele uzigqoka, kufanele wazi kuqala.
Usebenza kanjani ngenkanyezi
Kukhona ezinye iziqondiso ezivumela ukuqinisa bezikhali izinkanyezi.
Okokuqala, udinga ukugqoka inkanyezi ngokwakho. Lapho usahlala ekhaya, ungayisusa kusuka entanyeni hang on odongeni lokukhokhisa ekhaya energy oqondile.
Ithanda nsuku zonke ecela mayelana amandla inkanyezi nosizo, sinxuse ngqo maphakathi. Yonke inqubo ithatha imizuzu emihlanu nje kuphela.
nsuku zonke futhi kudingekile ukusebenza ne Chakras. Inkanyezi ibekwe maphakathi entendeni esiqhutshwa at ibanga 30-40 cm, kufanele uqale nge Chakra lwesikhombisa (Sahasrara). Gxila emizweni, ukuzindla.
Kunconywe ngendlela efanayo futhi osebenzisana umelelwe. Into esemqoka - ukulalela imizwa yakho, uma udinga isandla ukuletha lapho ukulahlekelwa. Nguleso naleso sigaba kuyadingeka ukuqedela Forces of sibonga Ukukhanya usizo.
Ukususwa kwezimiso okungekuhle
Ngezikhathi ezithile Ertsgammu kudingeka ukuba zihlanzwe. Ngemva ukwelashwa amaseshini, noma uma uthola emnyama. inkanyezi Usule abalandelayo - lehliselwa singene beaker ngamanzi zafakwa efrijini amahora angu-24. Ngemuva kwaleso sikhathi uzobona ebuhlungu Umhlahlandlela - yiso amandla omubi. Khona-ke eneqhwa, uthele amanzi (mhlawumbe lapho kungekho abantu abahamba) kanye ukugeza inkanyezi ahlanzekile ukugijima amanzi.
Ngaphezu kwalokho, i-umsebenzi ezijulile inkanyezi idinga ukwazi amagugu kanye nokuxhumana ngayinye imishayo.
Meaning of ugongolo ngayinye
Ngakho, amagugu ray ohlangothini ngokwewashi, kusukela phezulu kakhulu - Soul Ukuhlakanipha Paradox, Izimpawu, ukwazi, isipiliyoni, Izono / Amaphutha, Isikhathi, umzimba, Life, Ubuhlungu / Wokuphenduka Faith.
Ukuze babe njengentelezi ngempela ngempumelelo, futhi hhayi nje umhlobiso omuhle, inkanyezi Ertsgammy kumele icala. Lokhu kubaluleke kakhulu.
Ngesizathu esithile kucatshangwa ukuthi, njengomyalo Ertsgammy inkanyezi, eyaziwa kuphela Izanusi izangoma. Lena akuyona ngakho. Ertsgammu ungashaja umnikazi ukuba wenze ngendlela oyifisayo "ku wave bakhe" amandla ayo.
Indlela ukushaja njengentelezi akho
Ngakho, umuntu wathenga liyinkanyezi njengentelezi Ertsgammy. Indlela ukushaja ke? akunzima ngakho eqinisweni. Ngaphambi ukushaja njengentelezi udinga ukumelana wezinsuku ezintathu okusheshayo, kungaba abayekethisayo, qiniseka ukuthandaza noma ukuzindla, futhi ngosuku ukushaja (ngeSonto noma nganoma yiluphi umoya iholide) vakashela ethempelini. Kunoma ikuphi kubalulekile ukugxila emasikweni abo enkolo, akukho uhlelo olulodwa.
Ingabe ukubonakala kwale nkanyezi ukushintsha abanikazi
Yiqiniso, kungaba ngcono uma izinkanyezi kuyoba boss eyodwa kuphela. Kodwa ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi njengentelezi kudingeka kudlule komunye umuntu. Ngokwesibonelo, ngemva kokufa yomnikazi. Kulokhu-ke kubalulekile ukuba fumigate inkanyezi impepho "Aruna". Ngezinye izikhathi amakomidi kudlule nomunye abantu eduze, ngaphandle kokuqaphela ngobungcwele yonke wezenzo zawo. Kuyindida ngisho lapho uthenga indoda abakwazi ukuchaza ukuthi inkanyezi ukuthi ukuthenga futhi indlela yokuphatha kulo.
Menisci we ngokuhlanganyela amadolo: umonakalo kanye nokwelashwa
"FrutoNyanya" - ukubuyekezwa. Baby ukudla "FrutoNyanya": ayo, okhamiwe wahlanganiswa
Training Course "imali Inthanethi": Izibuyekezo
Manicure imfashini kunazo: izindaba, izitayela